I-Aprimo: Izixhobo eziGqithisileyo zoThengiso oluHlanganisiweyo | Martech Zone
Kulo nyaka, sibona inkqubela phambili emangalisayo kumdibaniso womsebenzisi wabathengisi. Kunyaka ophelileyo ndidibene neqela lobunkokheli e I-Aprimo emva kokuthetha no Haresh Gangwani, i-VP yesiCwangciso seMveliso. Inkampani ibisandula ukutshintsha iigiye kwaye yaqala ukubonelela ngeSoftware njengenkqubo ye "Studio".
Ndaziswa kwaye ndadibana ne-CEO yabo uBill Godfrey ixesha elide. Yayiyincoko engakholelekiyo malunga neNguquko yoThengiso… kwaye ngelishwa ndenza umsebenzi ohlwempuzekileyo ukuyirekhoda ukuba kufuneka ndiyilahlile. Ndonwabile nokudibana nomtsha UCMO Lisa Arthur onamava iminyaka engama-20 kwaye usebenze kwiingxilimbela ezinje ngeOracle, iAkamai kunye nezinye iifemu zetekhnoloji.
Into endiyijongele phantsi yayiyisixhobo sezixhobo esimangalisayo esenziwe ngu-Aprimo kwi-Intanethi kwaye wasibeka ezandleni zabaxumi. Ngelixa ezinye iinkokeli ze-automation zentengiso zingakhange zilungelelanise ujongano lomsebenzisi kwiminyaka-kwaye zisasebenzisa indibaniselwano enzima yolawulo lomsebenzisi, iskripthi kunye nee-API ukwakha iinkqubo zentengiso ezintsonkothileyo- i-Aprimo ibonelele abathengi bayo ngomama wabo bonke amava omsebenzisi… elula, entle, kunye nokudonsa okuphambili kunye nokwehla kokusebenza.
Nanku umzekelo wecandelo loyilo lwenjini. Izixhobo zingarhuqelwa kunxibelelwano kwaye zenziwe ngokulula. Inkqubo ikwabonelela ngokubalwa kubhabho. Imikhankaso ayikhawulelwanga kwi-imeyile, iinkqubo zokwahlulahlula ngokuzenzekelayo zinokuvelisa ngokuzenzekelayo uluhlu lwee-imeyile kubhabho ukubonelela ngenkqubo yemikhankaso enobunzima, eyahlukeneyo.
Abathengisi banokwakha amaphulo aphucukileyo axhokonxwayo ngesixhobo setayile yenkqubo yokuhamba:
Kwaye abathengisi bajonge ukuqinisekisa ukuba izicwangciso zabo zonke zihamba kakuhle, isisombululo sibonelela ngekhalenda kunye nembono yeGantt yamaphulo amaninzi:
Ukusuka kwindawo ye-Aprimo:
Ukudityaniswa kuka-Aprimo, kwisoftware yentengiso yenza ukuba abathengisi be-B2C kunye ne-B2B bakwazi ukuhamba ngempumelelo kwindima yokutshintsha kwentengiso ngokulawula uhlahlo-lwabiwo mali kunye nenkcitho, besusa iisilos zangaphakathi ngokuhamba komsebenzi kunye nokwenza amaphulo amatsha amajelo amaninzi okuqhuba i-ROI enokulinganiswa. Iqonga lethu lenziwa ngokwezifiso kwiimfuno ezithile zombutho wakho ngeemodyuli zoCwangciso loMsitho, uLawulo lweeMithombo zeNtengiso ze-MRM, uLawulo lwee-Asethi zeDAM, uLawulo lweNtengiso yeShishini, iziCwangciso zokuThengisa, ukuCwangciswa koMkhankaso kunye neQhinga, uLawulo lweBrand, uLawulo lweMidiya yoLuntu kunye nokunye.
utyelelo I-AprimoIndawo yolwazi olongezelelweyo. U-Aprimo ukwapapasha ezinye ezingakholelekiyo blogs kuthengiso olulinganisiweyo.
tags: aprimoU-billfreyukuthengisa umcimbiUCwangciso loMsithointengiso ehlanganisiweyo
Ngomhla wama-18 ku-Disemba 2016 ngo-10: 25 AM
Molo uDouglas inqaku elihle ngesihloko sentengiso ehlanganisiweyo.
Ukuzenzekelayo kudlala indima ebalulekileyo kwinkulungwane yama-21. Uninzi lolawulo olukhokelayo kunye neerhafu zokukhawulezisa ukuthengisa ziyimizekelo yoku. Intengiso edityanisiweyo edityaniswe noomatshini abazihambelayo inceda ekuchongeni indlela yokuziphatha komsebenzisi kunye nokuphendula ngokukhawuleza kwinqanaba lokuguqula ukongezwa.